Chelsea Iyo PSG Oo 1-1 Kukala Baxay +Sawiro+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Chelsea Iyo PSG Oo 1-1 Kukala Baxay +Sawiro+Video
Tababaraha kooxda Chelsea ee Jose Mourinho ayaa qirtay in kooxda PSG ay u qalan taay inay guulaysato halka uu sheegay in ayna Chelsea wax guul ah u qalmin. PSG iyo Chelsea ayaa kulankii lugta hore ee Champions League-ga kula baxay barbaro 1:1 ah.
Chelsea ayuu goolka udhaliyay Ivanovic wuxuuna ahaa bartilmaameedka kaliya ee ay Chelsea samaysay halka PSG uu goolka udhaliyay Cavani. PSG ayaan nasiib ku lahayn inay guulaysato inkasta oo ay samaysay fursado badan oo cadaan ahaa oo goolal loo fishay, waxaana inta badan guul la’aanta PSG masuul ka ahaa goolhaye Courtios oo kooxdiisa guuldaro ka badbaadiyay, wuxuuna sameeyay badaadino layaableh.
Mourinho ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Qaybtii hore ee ciyaarta anagaa iska lahayn, waxay PSG noo oglaatay inaanu kubbada hasano, wax yar ayayna cidhiidhi nagalisay laakiin qaybtii danbe ee ciyaartu way ka duwanayd.Waxaanu markasta doonaynay inaanu weerar deg deg ah qaadno, waxaan filayaa in natiijada barbarha 1:1 ka ahi ay fiican tahay marka la eego wixii dhacay waxaana mahad ku leh badbaadinihii fiicnaa ee uu sameeyay goolhaye Courtios”.
Mourinho oo qiranaya in PSG u qalantay inay guulaysto ayaa yidhi: “Daacad ahaantii, haddii ay cidi uqalntay inay guulaysto PSG ayaa u qalantay inay guulaysto may ahayn Chelsea laakiin wax kastaaba lugta danbe ayay furan yihiin. PSG waa koox fantastik ah waxaan filiyaa inaan xaqiiqdii wax fiican samaynay”.
Chelsea ayaa horyaalka Ingiriiska la ciyaari doonta kooxaha Burnley iyo West Ham halka ay Tottenham la ciyaari doonto finalka Capital One Cupka inta ayna kulanka lugta danbe ee Champions Leaque Stamford Bridge ku soo dhawaynin PSG